ဘဝသံသရာကို လောကဓမ္မတို့နှင့် နှိုင်းချင့်ဝေဘန်ခြင်း။
ဘဝဆိုသည်မှာ အမိဝမ်း၌ ကိုယ်ဝန်ပဋိသန္ဓေမှစ၍ သေဆုံးသည့်တိုင်အောင်အဆက်မပြတ်
တရားအစုကို ဘဝ ဟုခေါ်သည်။ ဖြစ်ပေါ်တတ် ကြီးပွါးတတ် ချမ်းသာမှု ဆင်းရဲမှု အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကြီးပွါးကြောင်း
ဖြစ်သောကြောင့် ဘဝ မည်၏ ဟု ဘဝအဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုထား၏။
Life is nothing dut struggle
Life is notamorning rose
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 8:42 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:23 PM No comments:
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် မြတ်ပန်းရဂုံတွင် ပါရှိသော ဘိက္ခုသုည၊ ဘားအံ-၏ မဂ္ဂင်ကိစ္စ မေးခွန်းသုံးပုဒ်ကို ဖြေကြားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:22 PM No comments:
ဆရာတော်သည် တောင်ကျရေခံရန် တူးထားသော ကန်အနီးလမ်းလျှောက်နေရာမှ ဘုရားဝတ်ပြုရန် ဟန်ပြင်ခိုက် “ကယ်တော်မူပါ ဆရာတော်ဘုရား” အသံနှင့် ဖက်တော့မယောင်ပြေးဝင်လာ၏။ နေ၀င်သွားသော်လည်း လရောင်ကလေးရှိနေ၍ ဒကာမရုပ်သွင် ကို ပြဲ့ပြဲ့ထင်ထင် မြင်နေရ၏။ “အင်း…ဒုက္ခပါတကား” ဟု ဆရာတော်ညည်းတွားခိုက် -
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 3:21 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:02 PM No comments:
၏၀မ်း၌ ပဋိသန္ဓေနေရလေ၏။ အရွယ်သို့ရောက်လျှင် သူတစ်ပါးမယားကို ပြစ်မှားခဲ့ဖူးသော ကံ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:57 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 4:54 PM No comments:
သုပ္ပဗုဒ္ဓလူနူကြီး ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါ သကြားမင်းက ဆင်းလာပြီးတော့ စမ်းတယ်။
နမော တေ ဗုဒ္ဓ၀ီရတ္ထု ၊ ၀ိပ္ပမုတ္တောသိ သဗ္ဗဓိ၊
သမ္ဗာဓပ္ပဋ္ဋိန္နောသ္မိ ၊ တဿ မေ သရဏံ ဘ၀။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:18 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:44 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:39 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ ဆူးလေစေတီတော်ကို ဖူးတွေ့ရတိုင်း ။ ။
ဦးချန်ထွန်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ ရွှေစလွယ်ရ သူဌေးကြီး ဦးရဲကျော်သူ၊ ဒေါ်သံ
ဒါဖြူတို့မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသန့်စင်ပြီး၊ အဖေ့ခြေရာနင်းခဲ့၍ ထိုခေတ် ထိုအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ
သာမက ဥရောပနိုင်ငံများ တလွားအထိပင် သူ၏အရှိန်အ၀ါ လွှမ်းမိုးခဲ့သော နာမည်ကြီး ဥပဒေ
ကျောင်းတော်သို့ သွားလေ့ရှိ၏။ နံနက်သွားလျှင် ယာဂု၊ နေ့လယ်သွားလျှင် အဖျော်ရည်၊ ညနေ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:25 PM No comments:
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁၇)။
“စိတ်မဲများကို ဖြူစင်စေသည့် နည်း ( ၆ ) မျိုး”
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:20 PM No comments:
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျယ်စွာ သုံးနေသော မင်္ဂလာပါ ဟူသော စကားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘုရားဟောဒေသနာနှင့်နှိုင်းချိန်ခြင်း
မင်္ဂံ ပါပံ လုနာတိ ဆိန္ဒတီတိ မင်္ဂလံ ဟု ဝစနတ္တပြု၍ မကောင်းမှုအကုသိုလ်အစုတို့ကို
ပယ်ဖျောက်ဖျက်ဆီးတတ်သောကြောင့် မင်္ဂလာ မည်၏ ဟု
လူတို့သည် အတိတ် နိမိတ် မင်္ဂလာ
စသည်တို့ကိုလွန်စွာစွဲလန်းယုံကြည်ကြ၏။အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံ ဇီးကွက်မည်သံတို့ကို ကြားရလျှင် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းသည် လာဘ်ကောင်းသည်ဟု ယူဆ၍
ခွေးအူသံ ကြားလျှင်သော်၎င်း အတိတ်နိမိတ်မကောင်း လာဘ်မကောင်းဟု ယူဆ စွဲလန်းတတ်ကြလေသည်။
နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော အာရုံတို့ကို တွေ့ရလျှင် မင်္ဂလာ
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 6:03 PM No comments:
ကျန်းဂန်လာအနာမျိုး ၉၆ ပါး
၁= မျက်စိ၌ ဖြစ်သောအနာ စက္ခု ရောဂ
၂= နား၌ဖြစ်သောအနာေ သာတရောဂ
၃= နှာခေါင်း၌ ဖြစ်သောအနာ ဃာနရောဂ
၄= လျှာ၌ဖြစ်သောအနာ ဇိဝှါရောဂ
၅= ကိုယ်၌ဖြစ်သော အနာ ကာယရောဂ
၆= ဦးခေါင်း၌ ဖြစ်သောအနာ သီသရောဂ
၇= နားရွက်၌ ဖြစ်သောအနာ ကဏ္ဏရောဂ
၈= ခံတွင်း၌ ဖြစ်သောအနာ မုခရောဂ
၉= သွားတကျင်နာ ဒန္တရောဂ
၁၀= ချောင်းဆိုးနာ ကာသ
၁၁= ကြို့ထိုးသောအနာ သာသ
၁၂= နှာခေါင်းပုပ်သောအနာ ပိနာသ
၁၃= ကိုယ်တွင်းပူသောအနာ ဍာဟော
၁၄= ဖျားနာ ဇရ
၁၅= ဝမ်း၌ဖြစ်သောအနာ ကုစ္ဆိရောဂ
၁၆= မူးဝေသောအနာ မုစ္ဆာ
၁၇= သွေးအန်သောအနာ ပက္ခန္ဒိကာ
၁၉= ဝမ်းကျသောအနာ ဝိသုစိကာ
၂၀= နူနာ ကုဋ္ဌ
၂၁= အိုင်းနာ မြင်းဖုစသောအနာ ကဏ္ဌက
၂၂= ညှင်း တင်းတိပ်နာ ကိလာသ
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 5:28 PM No comments:
ဟိုတ​လောကသူငယ်​ချင်း​တွေနှင့်​အတူကျိုက်​ထီးရိုးဘုရား​ရောက်​ခဲ့တယ်​။ သူငယ်​ချင်း​တွေကဘုရားကို​ရွှေချဖို့​ရွှေဆိုင်း​တွေဝယ်​ကြတယ်​။ဦးဦးကဘုရား​ရွှေမချခဲ့ဘူး။လမ်းအတွက်​ပဲလှူခဲ့တယ်​။ သူငယ်​ချင်း​တွေက​မေးတယ်​၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​ဖြစ်​ပြီးဘုရားကိုဘာလို့​ရွှေမချတာလဲတဲ့။ဦးဦးက​ပြောတယ်​။ ကိုယ့်​ခံယူချက်​နဲ့ကိုလုပ်​ပါ၊ကျုပ်​ခံယူချက်​ကို​ပြောရရင်​ဘုရား​တွေကို​ရွှေမချချင်​ဘူးလို့၊ဘာလို့လဲဆို​တော့ဘုရား​စေတီအတွက်​မလိုအပ်​​တော့ဘူးထင်​လို့​ပေါ့။ပြီးခဲ့​သောတစ်​ပတ်​ခန့်​က​ရွှေတိဂုံ​စေတီ​တော်​ကြီးကို​ရွှေ၂၄ပိဿာရှင်​ပြန်​ဆရာ​တော်​ကြီးလှူဒါန်းသွားတဲ့
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 4:53 PM No comments:
မြတ်စွာဘုရားက မဟာနာမကို အဆုံးအမပေးပုံက “အမျိုးသား ဥပသကာ တစ်ယောက်
ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီး ဥပသကာမ တစ်ယောက်ဖြစ်စေ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စဉ်းစား
ဉာဏ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်
တဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ အားပေးစကားပြောရမယ်။ ဆုံးမစကားပြောရမယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:02 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:58 PM No comments:
စရိုက် ၆ ပါး။
၁။ ရာဂ စရိုက် = ၀တ္ထုကာမ၊ ကိလေသာကာမတို့၌ လွန်ကဲစွာ ကပ်ငြိတတ်သောအကျင့်။
၂။ ဒေါသ စရိုက် = အာဃာတ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ စသည်တို့၌ လွန်ကဲသည့်အကျင့်။
၃။ မောဟ စရိုက် = ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေခြင်း လွန်ကဲသည့်အကျင့်။
၄။ သဒ္ဓါ စရိုက် = ယုံကြည်လွယ်လေ့ရှိသောအကျင့်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:54 PM No comments:
အာရုံတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ ရယူလိုခြင်းဆိုသည့် ဆန္ဒ။
“ဆန္ဒ၀တော ကိံနာမ နသိဇ္ဈတိ= ဆန္ဒရှိသူမှာ မပြီးနိုင်သောအရာ မရှိ” ။
အာရုံတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ ရယူလိုခြင်း သဘောသည် ဆန္ဒတည်း။ “ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ ရယူ
လိုခြင်း” ဟူရာ၌ လောဘကဲ့သို့ စွဲလမ်းတတ်ခြင်း၊ ကပ်ငြိခြင်းမဟုတ်၊ ပြုလိုရုံမျှ ရလိုရုံမျှသာ ဖြစ်
သည်။ ထိုပကြောင့် “သက်သက်အာရုံ၊ ပြုလိုရုံမျှ၊ ဆန္ဒသဘော ” ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဤဆန္ဒသဘော
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:50 PM No comments:
အင်းဝခေတ် ဓမ္မစာဆိုတော်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တောင်ဖီလာ ဆရာတော်ရဲ့ မွေးဇာတိက
စလင်းမြို့ဖြစ်ပြီး ပြည်မြို့မှာ စာပေသင်ကြားတတ်မြောက်လို့ ပြည်ပဉ္ဇင်းကျော်အဖြစ် ထင်ရှားပါ
တယ်။ ဆရာတော်မှာ= (၁) ။ သူငယ်ဘ၀တွင်လည်း ကျော်။
(၂) ။ သာမဏေဘ၀တွင်လည်း ကျော်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:47 PM No comments:
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 4:05 PM No comments:
တစ်ခါကတရားစခန်းပွဲတစ်ခုမှာ ဦးဣန္ဒကအမည်ရှိတဲ့တရားဟောဓမ္မကထိကတစ်ပါးက သူ၏တရားဟောရာမှာ
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 3:17 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:58 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:56 PM No comments:
ကျေးဇူးရှင် လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မဟာသရဏဂုံတော်ကြီး
ကျေးဇူးရှင် လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် သက္ကရာဇ် (၁၂၇၉)ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁)ရက်မှ တပေါင်းလကွယ်နေ့ အထိ မုံရွာမြို့အနီး ကြီးတွင်းကြီးတော ရတွင် ”မဟာသရဏ ဂုံတော်ကြီး”ကို (၅)လတိုင်တိုင် နေ့စဉ် မပြတ်ပူဇော်ခဲ့ရာ အကြိမ်ပေါင်း (၂၁၁၆၈ဝဝ) ၂သန်းကျော်မျှ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
အတ္ထိသုခ = လူတွေမျှော်လင့်ချက်အတိုင်း အောင်မြင်လာလို့ ရရှိလာတဲ့ ချမ်းသာက
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:41 PM No comments:
၄။ အကျိုးစီးပွား ရလိုသောကြောင့် ဆည်းကပ်၏တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:33 PM No comments:
ဗုဒ္ဓသာသနာသည် နှစ်ဘယ်လောက်ကြာသည်အထိ တည်တန့်မှာလဲ။
မယ်။ သာသနာတွင်းသားနဲ့ သာသနာပသား အခွင့်အရေးချင်းမတူပါ။ ဘာတွေကွာခြားသလဲဆိုရင်
သာသနာပမှာလဲ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ရှိပါတယ်။ သာသနာတွင်းမှာလဲ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ရှိပါ
တယ်။ ဒီလောက်ကတော့ တူပါတယ်။ သာသနာပမှာ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ ဘုရားအဆုံးအမတွေ
ကိုးကွယ်ခံ ရာဇဂုရု ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘကြီးတော်နှင့် သာယာဝတီမင်း လက်ထက်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:09 PM No comments:
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁၆)။
ရဟန်းဖြစ်ရုံဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သာသနာတွင်းရောက်ပြီလားလို့ သေချာအောင်စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။ ဥတ္တိစတုတ္ထခံယူကာမျှဖြင့် သာသနာတွင်းရောက်ပြီလို့ထင်နေသလား? ဥတ္တိစတုတ္ထဆိုတာ သံဃာကလက်ခံ
ချီးမြောက်ခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားလေးတစ်ဦးကို မုဒ္ဓါဘိသိက်သွင်းလိုက်သည့် သဘောမျိုးသာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမင်းသားလေး မင်းအဖြစ်ရောက်ပြီးမှ
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 7:08 PM No comments:
၁၂ ၁၂ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာကပေါ့
ချာတော့ အကူညီတောင်းတာနဲ့Mobile shop ကိုလိုက်ကူခဲ့တယ်။ အဲ့မှာပဲဆိုင်ရှင်
ဒကာနဲ့စကားစပ်ရင်း APK နဲ့ Webpage
ကိစ္စနွေးဖြစ်သွားတယ်။ ဒကာကြီးဦးဇင်းက ကိုယ်ပိုင်Webpageထောင်ပြီး APKနဲ့ချိတ်ပြီး သတင်းတွေ အသိပညာ
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 6:57 PM No comments:
၂း၄၀ နာရီခန့်လောက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှလွဲ၍
၂၁း၂၀ နာရီခန့် မနေမနား အများအကျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်သွားသဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓလောက် အလုပ်လုပ်သူကမ္ဘာမှာပင်မရှိပါ။
ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိ သာသနာ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သွားကြလေပြီ။
၁၆ ၁၂ ၂၀၁၄
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 6:48 PM No comments:
စိတ္တ ။ အာရုံကိုသိခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ ။
ဖဿ ။ အာရုံကိုထိတွေ့ခြင်းသဘော။
ဝေဒနာ ။ အာရုံ၏အရသာကိုခံစားခြင်း လက္ခဏာရှိ၏ ။
သညာ ။ မှတ်သားခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ ။
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 6:41 PM No comments:
တော်လိုက်တာ တတ်လိုက်တာ စသဖြင့်
ဒါကိုအားရလွန်ကျေနပ်လွန်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီကလေးဆိုသူတွေကိုသာမန်ကြည့်ရင် တော့ အသက်ကြီးပိုင်းကိုထောက်ရင် ဒီကလေးတွေငယ်တာဟုတ်ပါတယ်။
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 6:34 PM No comments:
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 3:38 PM No comments:
ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ -
၁။ သံသရာ၏အစကိုလည်းကောင်း သမုတိသစ္စာအလိုအားဖြင်. ‘လူ’ဟူ၍လည်းကောင်း ၊’ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ’ ဟူ၍လည်းကောင်း သမုတ်ကြသူတို.၏ဖြစ်ရာ အစ သည် (အ၀ိဇ္ဇာ နှင်.တဏှာ )ဟူ၍ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။
အဲဒီတော. မေတ္တာဆိုတဲ. သဘောတရားကို ဘာနဲ.လေ.ကျင်.ရမလဲ၊ အာရုံနဲ.ပဲ လေ.ကျင်.ရမယ်။ စိတ်တစ်ခုကို ထက်မြက်လာအောင် လေ.ကျင်.ချင်ရင် အာရုံနဲ.လေ.ကျင်.ရမယ်။ ဓားထက်အောင် ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ၊ ကျောက်နဲ.သွေးရတယ်၊ ကျောက်ပေါ်တင်ပြီးသွေးမှ ဓားထက်တယ်။ ထို.အတူပဲ ဒီ မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးဟာ ခိုင်မာကြီးထွားလာအောင် ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ၊
စိတ်ကောင်းမထားက ဆင်းရဲရ၏ ။
စိတ်ကောင်းထားက ချမ်းသာရ၏ ။
စည်ပင်တိုးတက် ကြီးပွားသည် ။
၁၅ ၁၂ ၂၀၁၄
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 12:59 AM No comments:
ဖြစ်ပါသည်။ သို့ ရဟန်းရှင်လူအများစုက
အသက်ငယ်ရဟန်း သာမဏေများကိုလည်း ဆရာတော်ဟုသုံးနှုန်းနေကြပါသည်။
ဘွဲ့ထည့်လျှောက်ရရင် ဦး ဆိုတာထည့်မလျှောက်ရဘူး ။ တပည့်တော် ပညာသိရီပါ စသဖြင့်သုံးနှုန်း
ဖို့ဆုံးမဖူးပါ၏ ဒါကြောင့်ပဲ အသက်ငယ်ကို
ခရီးများများသွားသောသူသည် ခလုပ်တိုက်မိတတ်၏ ။
ခလုပ်ဆိုတာတော့ ဒီနေရာမှာ အထက်လူနဲ့အောက်လူကိုဆိုလိုတာပါတဲ့။
၈ ၁၂ ၂၀၁၄
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 12:46 AM No comments:
ရဟန်းတော်များဆုပေးရခြင်းမှာ အလှူရှင်များအနေဖြင့် လောကီအာရုံခံစားမှု တဏှာစွဲဖြင့်ဆုတောင်းပါက ဆုတောင်းမှားတတ်သဖြင့် ဆုတောင်းမမှားကြစေရန်ဖြစ်သည်။
၁ ။ တဏှာပတ္ထနာ လောကီအာရုံကာမဂုဏ်ပြည့်ဝရေး
၂ ။ ကုလစ္ဆန္ဒပတ္ထနာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို
သာ တောင်းသင့် ပေးသင့်ပေသည်။
အဋ္ဌကထာတို့၌အတိအကျညွန်ပြထားပါသည်။ ဆုတောင်းမှားက ဒုက္ဓများတတ်ပါသည်။
ခုဒ္ဒက ပါဌ အဋ္ဌကထာ ၁၉၁
Posted by ၀ိဘဇ္ဇသွေး at 12:28 AM No comments:
၁။ ချမ်းသာလိုခြင်း။ ။ လူသားတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ လိုအင်ဆန္ဒ၊ခြုံငုံပြီးတော့ ပြောရ
မယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်ချင်ကြတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်ကြ
တယ်။ ဒါဟာ လူသားတိုင်း မျှော်လင့်တောင်းတကြတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပါ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ကြီးပွားချမ်းသာချင်ကြတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:04 PM No comments:
၁။ အသက်တမ်း ကုန်ခြင်း။ (ဥပမာ- ဆီမီးငြိမ်းရာ ဆီကုန်ခြင်း။)
၂။ ကံ အစွမ်းကုန်ခြင်း။ (ဥပမာ- ဆီမီးငြိမ်းရာ မီးစာကုန်ခြင်း။)
၃။ အသက်တမ်း၊ ကံ အစွမ်း ၂ မျိုးလုံးကုန်ခြင်း။ (ဆီနှင့် မီးစာ ၂ မျိုးစလုံး ကုန်ခန်းခြင်း။)
၄။ ဥပစ္ဆေဒကကံက သတ်ဖြတ်ခြင်။ (ဆီနှင့်မီးစာ ရှိသေးပါသော်လည်း လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:58 PM No comments:
မသိခြင်း သဘောကို မောဟဟုဆိုခြင်းကြောင့် မသစ်ဖူးသောအတတ်၊ မရောက်ဖူးသော
အရပ်နှင့် မမှတ်ဖူးသောနာမည် စသည်တို့ကို မသိခြင်းများလည်း မောဟအစစ်၊ အကုသိုလ်ဖြစ်
သည်ဟု မှတ်ထင်တတ်ကြ၏။ ထို မသိမျိုးမှာ မသိရုံသက်သက်သာဖြစ်၍ မောဟအစစ် အကုသိုလ်
အစစ် မဖြစ်ပါ။ မိမိ၌ မှတ်သားဖူးသော သညာ မရှိမှုသာတည်း။ ထို မသိမျိုးမှာ သာမန်လူတွေကို
မဆိုထားဘိ ရဟန္တာများပင် ရှိပါသေးသည်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:47 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:13 PM No comments:
၅။ပဌာန်းတရားဟောကြားရာ ကြာမြင့်ချိန်ကာလ = ဝါတွင်းသုံးလ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:12 PM No comments:
“သမဏဖြစ်စေ ဗြာဟ္မဏဖြစ်စေ နတ်ဖြစ်စေ မာရ်နတ်ဖြစ်စေ ဗြဟ္မာဖြစ်စေ လောက၌ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေ သေခြင်းသဘောကို ”မသေစေအံ့”ဟု တာဝန်ခံနိုင်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။”
ဇာဏုသောနိပုဏ္ဏားကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားထံ လာ၍ လျှောက်ထား၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:10 PM No comments:
တစ်ချိန်တုန်းက လူသားတွေဟာ ဒီကနေ့ အခြေအနေမျိုး မရောက်ခင် အလွန်သာ
ယာ အေးချမ်းပြီးတော့ အစစအရာရာ စုံလင်ပြည့်ဝတဲ့ “ရွှေခေတ်” လို့ ခေါ်ရမယ့် ခေတ်တစ်
မျိုးကို ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။ ထိုအချိန်တုန်းကတော့ လူသားတွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ် ၈၀၀၀၀
သက်တမ်းရှည်တယ်။ နှစ် ရှစ်သောင်း သက်တမ်းရှည်တဲ့ လူ့လောကမှာ ပြဿနာအလွန်နည်း
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျယ်စွာ သုံးနေသော မင်္ဂလာပါ ဟူသော စကားန...
အာရုံတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်လိုခြင်း၊ ရယူလိုခြင်းဆိုသည်...
စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား တည်ကြည်တဲ့ ထေရိကာ- ရဟန္တာ...